Obbo Lammii Beenyaafi Obbo Daawwit Abdataa ji’a sadii booda, guyyaa har’aa yeroo jalqabaaf mana murtii Federaalaatti dhiyaatan. – Kichuu
Qondaalota ABO olaanoo kan ta’an Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa ajjeefamuu Artist Hacaaluu Hundeessaa booda namoota siyaasaa Oromoo, mootummaa Itiyoophiyaatiin hidhaman keessaa warra tokko ta’uun isaanii ni yaadatama.
Manni murtii walii gala Oromiyaa yeroo garaagaraatti, yakka isaan ittiin himataman kufaa taasisuun biliisa isaan baasus, poolisiin mana hidhaa itti jijjiiruun yeroo ammaa kana Godina Shawaa Bahaa magaalaa Moojootti hidhamanii jiraachuus gabaasaa turuun keenya kan yaadatamudha.
Koomishiin poolisii Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa kana mana murtiitti dhiheessuu diduusaaf akkasumas ammoo ajaja mana murtii hojiitti hiikuu dhabuudhaan, Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa hiikuu dhabuu isaaf, koomishiinerri Koomishiinichaa Obbo Araarsaa Mardaasaa mana murtiitti dhihaatanii deebii akka kennaniif manni murtii walii gala Oromiyaa dhaddacha yakkaa Sabbataa beellama qabatee jira.
Bu’uruma kanaan, abbaan Alangaa Oromiyaa himatamtoota kanarratti oliyyannoo fudhateen, manni murtii Federaalaa dhaddacha yakkaa Lidataa guyyaa har’aatti beellamuunsaa kan yaadatamu yoo ta’u, hidhamtoonni siyaasaa kunniin guyyaa har’aa mana murtii Federaalaatti dhihaachuu isaanii maatiin OMN-tti himaniiru.
Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa oliyyannoo Abbaa Alangaa Oromiyaan mana murtii Federaalaatti fudhateef guyyaa har’aa deebii akka kennaniif dhihaatanis, Abukaatoon isaanii himannoo kanarratti qophaa’ee ture Obbo Boonaa Yaazoo magaalaa Adaamaatti poolisii Oromiyaatiin guyyoota lama dura sababa hidhameef, beellama har’a irratti deebiin osoo hin dhaga’amiin hafuuf dirqamuu maatiin OMN-tti himaniiru.
Sababa Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun hidhameef, deebiin utuu hin dhaga’amin darbuun, manni murtichaa beellama itti aanu, Eebila 12/2013-tti akka qabate miseensi maatii OMN dubbise himanii jiran.
Ji’oota sadiif mana murtiirraa ittifamuu ilaalchisuun, dubbi himatamtoonni dhaddacharratti dubbata sababeeffachuun manni murtichaa maalif akka ittifaman abbaa Alangaa yoo gaafatu, Abbaan Alangaa ‘akka isaan hidhamanii jiran quba hin qabnu’ jechuun deebii kennuunsaa miseensi maatii hidhamtootaa OMN-tti dubbise himaniiru.
Obbo Lammii Beenyaafi Daawit Abdataa dhaddacha irratti kallattiin akka hiikaman erga ta'ee booda, deebifamanii hidhaman.